Filtrer les éléments par date : jeudi, 13 janvier 2022
jeudi, 13 janvier 2022 19:28
Andriambe - Ankazobe : Nisy nandoro ny EPP
May nisy nandoro ny alin'ny alarobia hifoha ny alakamisy 13 janoary 2022 ny EPP Andriambe, ZAP Ankazobe, DREN Analamanga.
Mitranga izany andro vitsy tsy hiverenan'ny mpianatra an-dakilasy indray manomboka amin'ny alatsinainy 17 janoary.
Eo ampitadiavana vahaolana hahafahana mandray ireo mpianatra amin'ny alatsinainy ireo tompon'adraikitra ao an-toerana.
jeudi, 13 janvier 2022 19:27
Volamena 49kg : Tafaverina eto Madagasikara ireo Malagasy tratra tany Comores
Tonga tany Comores, ny 11 janoary 2022, ny delegasionina malagasy notarihan'i Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, IMBIKI Herilaza, hifampiraharaha amin'ny Fitondrana Kaomorianina, mahakasika ny amerenana ilay volamena 49kg, avy aty Madagasikara, tratra tany an-toerana.
jeudi, 13 janvier 2022 17:33
Fikambanana Aigny Araiky : Nanampy ireo mila fitsaboana maika Toamasina
Tonga nanatitra ny fanampiana avy amin'ny Fikambanana Aigny Araiky, izay miara-miasa amin'i IMBIKI Herilaza, Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, ireo solotenan'ny tanora mpikambana ao Toamasina, ho an'ireo mila fitsaboana maika sy fandidiana ao amin'ny hopitaly manarapenitra Toamasina.
jeudi, 13 janvier 2022 16:45
Toaka gasy : 480 litatra avy any Tanambe Alaotra sarona tany Ampitambe Moramanga
Ny Zandary avy amin’ny Brigade de Police de la Route miasa any Tanambao Ampitambe, ao avaratr’i Moramanga amin’ny RN44, no nahatratra ny entana tsy ara-dalàna ny alin’ny 10 janoary.
Fiaran’ny kaoperativam-pitaterana KOFIMA niainga avy tany Tanambe Alaotra ho any Antananarivo no nitondra azy, araka ny nambaran’ny kapiteny Razafimamonjy Jean Richard, lehiben’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ao Moramanga.
Baoritra miisa 16, nahitana tavoahangy miaty 1,5 litatra, miisa 30 avy, no hita tao anaty fitoeran’entana ambany taorian’ny fisavàna.
Nalefa nandeha aloha ilay fiara noho izy nitondra mpandeha iny alina iny.
Notanana kosa ny taratasy rehetra momba azy noho ny fisian’ny fanasaziana ara-panjakana tsy maintsy hampiharina aminy.
jeudi, 13 janvier 2022 16:44
Amboasary Gara (MLA) : Votsotra ilay vehivavy bevohoka nisy naka an-keriny
Ny tompom-bady mihitsy no nampahalala tamin’ny alalan’ny Facebook fa dia avotra soa aman-tsara ny vadiny (izay mitondra vohoka) sy ny rafozany.
Ny talata 11 janoary 2022 no navotsotry ny andian-jiolahy izay naka an-keriny azy ireo, tany Somangana, atsinanan’Amboasary Gara (MLA), Moramanga, ny 30 desambra 2021 lasa teo.
Omaly alarobia 12 janoary dia nanamafy tato amin’ny Facebook ihany koa i Hasinah Rasoamalaza Tudy fa efa tafaverina soa aman-tsara eny anivon’ny fianakaviany izy.
Nandritra ny 11 alina sy 10 andro izy no teo am-pelan-tanan’ireo naka an-keriny, araka ny filazany.
Tsy salama izy, ary dia mbola mangata-bavaka, hoy hatrany izy.
Samy nisaotra an’Andriamanitra sy izay rehetra nitrotro am-bavaka sy nankahery ny fianakaviana noho ny sedra mafy nolalovany izy mivady.